Shiinaha XY-1513 Naqshadeynta mesh mesh mesh soo saarista iyo warshad | Shuolong
XY-1513 Dhismaha Mesh Mesh Screen
XY-1513- mesh bir ah ayaa lagu dhejiyay alaabta guriga, iskudarka mesh naxaas ah oo qadiimi ah iyo alwaaxa alwaaxa ayaa ka dhigaya qaabka guud ee alaabtu raaxo badan.
Waxyaabaha: Qalabka birta aan xad lahayn
Miisaanka: 5.3kgs / m2
Aagga Furitaanka: 36.4%
Dhumucda mesh: 2.5mm
Daaweynta Dusha sare: saliid nadiif ah oo bilaash ah
Baaxadda ugu Weyn: 4m
Muddada ugu badan: 20m
Mesh mesh ayaa loo isticmaali karaa qurxinta alaabta guriga, iyo inta badan mesh birta qadiimiga ah ee qadiimiga ah waxaa loo isticmaalaa albaabka golaha. Midabada birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah ayaa loo adeegsadaa xirmooyinka bacda kabaha ee suuqyada laga dukaameysto. Iftiinka nalalka, waxay sii wanaajineysaa heerka alaabada iyo qaabka guud ee bakhaarka.
Waxaa intaa dheer, haddii aad u baahan tahay inaad ku darto waxyaabo naqshadeynta mesh birta ah mashaariicdaada socda ama soo socota, fadlan si toos ah noola soo xiriir. Marka lagu daro badeecado tayo sare leh iyo qiimaha ugu fiican, waxaan sidoo kale bixin karnaa adeegyo habeysan iyo xalalka rakibida ee barnaamijyadaada.
Xirmooyinka 1.waxaa si aad ah loogu dhejinayaa mesh qaabdhismeedka, baakadaha wanaagsan ayaa si wax ku ool ah u ilaalin kara badeecooyinka si ay u helaan mesh macaamilka si habsami leh.
Marka loo eego noocyada mesh kala duwan, cabirka iyo astaamaha, SHUOLONG waxay sameysaa xirmo wanaagsan amar kasta. Xarunta adeegga ee ku saabsan waxyaabaha la doonayo.
2.Arrinta habka gaadiidka, waxaan ku siin karnaa adeegyo caalami ah oo degdeg ah, sida TNT, FedEx, UPS, DHL, iwm, waxaan sidoo kale ku siin karnaa adeegyada gaadiidka badda.
1) Kumbiyuutar kasta oo ku duubaya warqad, 1-5pcs sanduuq alwaax ah;
2) Lagu habeeyay baahidaada.
Hebei Shuolong Birta Products Co., Ltd.. waa soo saare tayo sare leh Shiinaha oo ka sameysan mesh silig bir ah oo loogu talagalay warshadaha dhismaha iyo warshadaha. Waxaa loo isticmaali karaa sida Wajiyadaha Dibadda, Balustrades, Gogosha jaranjarada & Shaashadaha, Shaashadaha & Saqafka, Gudaha, Daahyada birta, Qaybaha qolka, iwm.
Waxaan uxiran karnaa tayo sare, mesh qaabdhismeed caan ah oo sifiican loogu talagalay baahidaada mashruuca. Macluumaad yar oo taariikhi ah oo ku saabsan noocyada birta, dhexroor silig, daamur iyo dambiil, waxaad si fudud noolala soo xiriiri kartaa wixii saxda ah ee aad u baahan tahay si aad mesh mesh kaaga uga dhigto mid si dhammaystiran ula shaqeeya inta ka hartay naqshadeyntaada. Haddii aad raadineysid naqshad fudud ama qaab gaar ah, weyn ama yar, waxaan ku qanacsanahay fursadda ah inaan qayb ka noqonno mashruucaaga soo socda!
Maaddaama ay tahay soo saare mesh silig leh taariikh ku dhow nus qarni, SHUOLONG waxay leedahay awood ku filan oo ay ku xakameyso tayada amar kasta. Isla mar ahaantaana, waxaan lahaan karnaa kharashka tooska ah ee alaabada mesh siligga. Waxaan kaliya sameynaa mesh silig, waxaan nahay xirfadle!
Khibrad 1.40 Sano ah : In ka badan 40 sano oo waayo-aragnimo ah soo saarista mesh silig.
2.Garanti tayo leh: Amar kasta waxaa loo tijaabiyaa oo loo xakameeyaa si adag iyadoo loo eegayo heerka ka sarreeya heerka caalamiga.
Rakibaadda & Qalabka: Waxaan kuu soo bandhigi karnaa xalal mesh silig xalal iyo qalab adiga kuu gaar ah
Haddii aad rabto inaad dalbato ama aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mesh-ka birta ah, fadlan farriintaada ku qaado boggayaga internetka, na soo wac ama u soo dir shuruudahaaga email-kaaga, waxaan kuugu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood!
Hore: XY-2027 Shaashadda Qalabka Mashiinka Qalabka ee Qurxinta Qalabka
Xiga: XY-1510G Qadiimiga Naxaaskiisa mesh Wire mesh
Guddiyada Saqafka Birta ah ee Mesh Mesh
Shaashadda Birta Mesh
Ahama Screen mesh Screen
XY- C1 Mesh Mashiinka Mashiinka Qadiimiga ah ee Alaabta Guryaha
XY-2176 ahama Steel Wire mesh Muraayadaha for Ca ...
XY-2027GO Mesh Mesh Qurxinta Qalabka
XY-C1S ahama Steel Flat Wire mesh